» फागुन १६ देखि २६ सम्म हुने राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको तैयारी तीब्र ।
८ फाल्गुन २०७५, बुधबार १५:५७
पवन कार्की, मकवानपुर ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको मुख्य आयोजनामा फागुन १६ देखि २६ सम्म हेटौंडामा हुने राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला २०७५ को तयारीका विषयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी गराएको छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको सहयोगमा हेटौंडा–५, क्याम्पा चौरमा मेला आयोजना गर्न लागिएको हो । उद्योग तथा स्थानीय उत्पादनहरुलाई सहज ढंगले उपभोक्ता समक्ष पु¥याउने लक्ष्यका साथ मेलाको आयोजना गर्न लागिएको संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश ३ भित्रका स्थानीय उत्पादनहरुको साथै मकवानपुरमा विशेष गरी चेपाड्ड समुदायहरुले खाने गिठ्ठा, भ्याकुर, मकवानपुरे पहिचान ठेकी जस्ता मौलिक बस्तुहरुको प्रदर्शनी, पञ्चेबाजा, खैंजडी भजन जस्ता स्थानीय संस्कृति, भेषभुषाहरुको प्रवद्र्धन, स्थानीय कृषि उपजहरुको प्रवद्र्धन तथा लघु तथा घरेलु उद्यम, हस्तकला, औद्योगिक बस्तु तथा सेवाहरुको प्रदर्शनी गरिने जनाईएको छ । मेलामा दैनिक स्थानीय कलाकारहरुको साथै राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गर्ने बताईएको छ । मेलामा करीब ४ सय ५० स्टलहरु रहने जनाईएको छ । मेलामा आदिवासी जनजातिलगायतका मुनाफा रहित संघसंस्थाहरुलाई निःशुल्क स्टल उपलब्ध गराएको बताईएको छ ।
मेलाको अवलोकनका लागि प्रतिव्यक्ति रु. ५०।–, विद्यार्थी कार्डसहितलाई रु. ३०।– र ७० वर्ष माथिका बृद्धबृद्धाहरुलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था मिलाईएको संघका प्रवक्ता काव्यमणी अधिकारीले जनाएका छन् । मेलाको आम्दानीबाट संघले अतिथि भवन बनाउन खर्च गर्ने बताईएको छ ।
मेलाको प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलबाट फागुन १६ गते उद्घाटन गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।